Thenga inombolo yocingo ngokuqinisekisa i-sms
Thola imilayezo ye-SMS
ukuze ubhalise kunoma yimaphi amasayithi
Xhumana nathi Ngena
Izinombolo zocingo zesikhashana ukuthola i-SMS
Thola imilayezo ye-SMS ozoyibhalisa kunoma yimaphi amasayithi
Inombolo yocingo ebonakalayo ye-sms
Thenga inombolo yama-sms Faka i-imeyili yangempela, dala i-akhawunti
bese uthola inombolo yokwenza kusebenze kwe-SMS.
Ufuna ukubhalisa i-akhawunti kepha isiza sidinga isiqinisekiso
Isevisi yethu izokunikeza inombolo yocingo ukudlula ukuqinisekiswa kwe-SMS . Ungayisebenzisa ukuthola i-SMS enekhodi yokuqinisekisa.
Umbhalo onekhodi yokuqinisekisa uzothunyelwa kwinombolo oyikhethile futhi uzoboniswa kwi-akhawunti yakho esizeni sethu.
Manje ungakugwema ukusebenzisa inombolo yakho ukudala ama-akhawunti noma ukubhalisa kumawebhusayithi.
Izinombolo eziqashiwe zizokusiza uqinisekise kunoma iyiphi isayithi noma insizakalo. Thola imilayezo ye-SMS online ngomzuzu owodwa nje.
Amazwe angama -80 + ayatholakala kusevisi yethu ukuthola izinombolo ezivela ku: Germany, USA, Russia, China, Indonesia, Japan, France nokuningi. Ngokuzayo, kuzokwengezwa amazwe angaphandle angaphezulu kokuqasha izinombolo ezibonakalayo.
Inombolo yocingo imizuzu engama-20
Ukhokhela kuphela imiyalezo engenayo. Ngalesi sikhathi inombolo engenamkhawulo yemiyalezo ye-SMS ingathunyelwa kunombolo ekhethiwe.
Izinombolo zingasetshenziswa ukwenza kusebenze zonke izinsizakalo ezibalwe kusayithi. Khetha eyodwa oyidingayo bese uthola isiqinisekiso se-SMS kunombolo yakho eku-inthanethi. Bese ukopisha ikhodi ye-SMS bese uyinamathisela kulayini ofanele lapho ubhalisa i-akhawunti yakho.
Hlanganisa izinhlelo zakho zokusebenza, thola izinombolo zemiyalezo ye-SMS. Thola izinkulungwane ze-SMS ngomzuzu bese ubhalisa ama-akhawunti ngemizuzwana! Sebenzisa i-SDK yethu ukuhlanganisa okusheshayo nokulula ne-API yethu enamakhodi amaningi.
Sebenzisa izinombolo zethu ukuvikela ubumfihlo bakho - ungayikhiphi eyakho.
Ungavumeli izinkampani ukuthi zithengise kabusha imininingwane yakho.
Ukubethela okunamandla kuzo zonke izikhathi eziku-inthanethi.
Sebenzisa inombolo yesikhashana kunoma ikuphi ukubhaliswa
I-SMSVERIFY ilungele ukubhalisa:
Umsebenzisi angaqinisekisa yonke inethiwekhi yokuxhumana nabantu njengokuthi
I-Facebook, i-Instagram, i-Twitter, iTumblr, i-Google +
namanye amanethiwekhi omphakathi.
Ama-akhawunti endawo yemakethe
Ama-Wildberries, Tmall, Rakuten
yocingo, WhatsApp, Viber, WeChat,
Facebook, Snapchat, Skype, Line, Tencent, QQ nabanye.
Sinikela ukuqinisekisa (i-Gmail, i-Google voice,
i-akhawunti ye-Microsoft, i-imeyili ye-Yahoo) Thola imiyalezo ye-SMS yanoma yiziphi izingosi nezinsizakalo
Sisebenzisana nabathwali beselula bakazwelonke ukukunikeza ukufinyelela enombolweni yocingo esebenza e-US.
Ngensizakalo yethu, ungacela ukufinyelela kwinombolo yocingo bese usebenzisa inombolo ukuthola imiyalezo ye-SMS.
Imilayezo izothunyelwa kwi-akhawunti yakho ngqo ngokusebenzisa ingosi yethu.
Ingabe izinombolo zakho zingumakhalekhukhwini zangempela?
Yebo, lezi izinombolo zangempela zeselula. Akuzona izinto ezibonakalayo futhi zingasetshenziselwa ukuqinisekisa nganoma iyiphi insizakalo, ipulatifomu noma isayithi usebenzisa umbhalo noma ukuqinisekiswa kwekholi. Sisebenza nabahlinzeki bezingcingo eziphathwayo ukuze ukwazi ukucela ukufinyelela kuzinombolo zocingo zangempela ukuthola imiyalezo ye-SMS. Imilayezo izothunyelwa ku-akhawunti yakho ngqo kusayithi lethu.
Izindleko ze-SMS etholakele ziqala kusuka ku- $ 0.01. Ungathola inombolo mahhala.
Unezinombolo ezingaki? (Ingabe ahlukile? Ingabe abanye abasebenzisi bathola inombolo efanayo engiyisebenzisayo?)
Inombolo inikezwe wena kuphela. Asithengisi inombolo efanayo kabili.
Ngingayisebenzisa kanjani inombolo ebonakalayo ukuthola imilayezo ye-SMS online?
Ukwamukela i-SMS enombolweni yocingo olusebenzayo kuzodingeka ukuthi:
Khetha izwe ohlwini olusendaweni.
Khetha opharetha weselula (uma kunendaba kuwe).
Khetha isayithi noma insiza lapho ufuna ukuvula khona i-akhawunti.
Bese ukopisha inombolo bese uyisebenzisa ukuthola imilayezo ye-SMS evela kusayithi elikhethiwe.
Emizuzwini embalwa, uzothola umbhalo noma ikhodi ye-SMS ekhasini elihambisanayo lenkonzo yethu ye-SMS.
Manje usuyazi ukuthi ungayithola kanjani imilayezo ye-SMS ngaphandle kocingo ngokusebenzisa ukuqashwa kwezinombolo zesikhashana.
smsVERIFY.PRO Yenziwe nge eRussia
I-copyright © 2020 SmsVerify. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Sicela usisize senze insizakalo ibe ngcono. Sicela ubike noma yimaphi amaphutha atholakele ekuhumusheni ku-imeyili yethu: smsverify.pro@gmail.com